जन्मान्तर परिवार व्यवस्थापनमा सहयोगी | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ११ माघ २०७७, आईतवार २०:०८
बर्सेनि सन्तान जन्माएकै कारण समस्या भोगेकी टीकापुर–७ की सुदेश्नी डगौराको र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या छ । डगौराले पाँच वर्षमा तीन बच्चालाई जन्म दिनुभयो । “पहिलो बच्चा छोरा जन्मियो, पहिलो बच्चा १७ महिनाको थियो, छोरी जन्मिइन्, दोस्रो सन्तान पनि हुर्कन नपाउँदै अर्को छोरी जन्मिइन”, सुदेश्नीले भन्नुभयो, “पाँच वर्षमुनिका तीन बच्चा कसरी स्याहार्नु ? मलाई निकै दुःख छ । पति ज्यालादारी गर्न दिनभरि घरबाहिर हुन्छन् । म एक्लैले तीन बच्चा स्याहार्न कठिन भएको छ ।”
सुदेश्नीको स्वास्थ्य कमजोर छ । उहाँको मात्र होइन तीनै बच्चा पनि स्वस्थ छैनन् । “एउटा बच्चालाई कुपोषण भएको छ । बच्चा बिरामी भइरहन्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पतिको कमाइ थोरै छ । बच्चाको उपचार गर्नु कि, आफूले खानु ? उपचारमा धेरै खर्च भइसकेको छ ।”
सन्तानबीच जन्मान्तर नहुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । सन्तानबीच जन्मान्तर नहुँदा महिलाको पाठेघरमा विभिन्न समस्या आउनुका साथै रक्तश्राव हुने र गर्भ नरहने हुनसक्ने टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स कल्पना खड्का बताउनुहुन्छ । “बर्सेनि सन्तान जन्माउँदा आमा र बालबालिकामा मानसिक र शारीरिक समस्या आउने गर्दछन् । मातृ तथा बाल मृत्युदर बढ्ने जोखिम रहन्छ”, स्टाफ नर्स खड्का भन्नुहुन्छ, “बर्सेनि जन्मिएका सन्तानको स्याहारसुसार राम्रो हुँदैन, बच्चाको मस्तिष्क विकास हुने समयमा स्याहार नपाएको बच्चा कस्तो होला ? त्यसैले हरेक दम्पती सचेत हुनुपर्छ ।”
स्टाफ नर्स खड्का टीकापुर अस्पतालमा सेवा लिन आउने हरेक गर्भवती र बच्चाका आमालाई जन्मान्तरबारे जानकारी दिने गरेको बताउनुहुन्छ । “सेवा लिन महिला आउँछन्, बच्चा जन्माउने कुरा दम्पतीबीचको सल्लाह हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले श्रीमान् पनि ल्याएर आउनु भन्छौँ, सन्तानबीच कम्तीमा पनि तीन वर्ष जन्मान्तर राख्न सल्लाह दिन्छौँ । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिले पनि जन्मान्तर आवश्यक छ ।’’